Sixirka Kenya ee geesiyaasha Dalxiiska Cusub ee WTM London oo ay samaysay Shabakadda Dalxiiska Adduunka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Awards » Sixirka Kenya ee geesiyaasha Dalxiiska Cusub ee WTM London oo ay samaysay Shabakadda Dalxiiska Adduunka
Guddiga Dalxiiska Afrika • Wararka Ururada • Awards • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka Mareykanka • Wtn
Abaalmarinta geesiyaasha Dalxiiska
Maxaa loo baahan yahay si aad u noqoto Halyey Dalxiis? Shabakadda Dalxiiska Adduunka ayaa maanta iftiimisay arrintan waxayna aqoonsatay qaar ka mid ah kuwa u soo maray miyiga dheeriga ah si uu dalxiisku ugu sii socdo masiibada COVID-19.
Maanta oo ay bishu tahay 1-da Noofambar ayaa waxaa magaalada London ka furmaya suuqa socdaalka aduunka ee lagu magacaabo Excel Exhibition Center.
Waxay sidoo kale ahayd markii ugu horreysay ee xubnaha Shabakadda Dalxiiska Adduunka ay si shaqsi ah u kulmaan ka dib boqollaal shirar zoom ah intii lagu jiray COVID-19.
Sidoo kale waxay ahayd maalintii qaar ka mid ah geesiyaasha Dalxiiska ee ay bixiso Shabakadda Dalxiiska Adduunka ay ku kulmeen magaalada London ee xarunta WTN si ay u guddoomaan shahaado abaal-marineed.
Guddoomiyaha Shabakadda Dalxiiska Adduunka, Juergen Steinmetz, ayaa yidhi "Waxaa jira boqollaal kun oo geesiyaal Dalxiiska ah, maanta, "si loo sharfo dhammaan geesiyaashaas sii waday safarkayaga iyo warshadaha dalxiiska ee ku socda COVID-19. Waxaan ugu yeernaa geesiyaal aan la aqoon. Meel walba way joogaan. Qaarkood waan aragnaa, waan ognahay, waana aqoonsan karnaa. Tani waa waxa aan sameyneyno maanta."
Shabakadda Dalxiiska Adduunka (WTN) waxaa la aasaasay Diseembar 2020, ka dib 9 bilood dib u dhiska.rajo doodaha waxaa soo qabanqaabiyay Juergen Steinmetz, daabacaha eTurboNews.
Wadahadalka dib-u-dhiska wuxuu ka bilaabmay dhinaca ITB Berlin oo la joojiyay bishii Maarso 2020 oo ay weheliso PATA, Guddiga Dalxiiska Nepal, eTurboNews, iyo Guddiga Dalxiiska Afrika.
Maanta, WTN waxay xubno ku leedahay dalxiiska dadweynaha ama kuwa gaarka loo leeyahay ee 128 waddan.
Sannad ka hor, WTN ayaa aasaasay Hoolka Caalamiga ah ee Halyeeyada Dalxiiska. Tani waxay ahayd in la aqoonsado kuwa qaaday tallaabadii dheeriga ahayd ee lagu hoggaamin lahaa warshadahan iyada oo loo marayo xiisadda COVID-19.
Lahaanshaha sawirka Christian del Rosario ee CDR Gallerries
Afartii Halyey ee ugu horreysay ee la abaalmariyey waxay ahaayeen Mudane. Najib Balala, Xoghayaha Dalxiiska ee Kenya; Mudane. Edmund Bartlett, Wasiirka Dalxiiska Jamaica; Dr. Taleb Rifai, Xoghayihii hore ee UNWTO; iyo Tom Jenkins, maamulaha guud ee ETOA.
Maanta, geesiyaal ayaa markii ugu horeysay kulmay, waxaana marti ku ah Magical Kenya oo ka dhacay Suuqa Socdaalka Adduunka ee London.
Waxay ahayd maalin gaar ah oo saaxiibada gaarka ah iyo kuwa cusub ee zoom ay si shaqsi ah ula kulmaan. Qaar badan oo ka soo qaybgalay WTM iyo xubno ka tirsan WTN ayaa soo muuqday, iyagoo gacan qaadaya markii ugu horeysay. Waxay u ahayd daqiiqad qiiro leh.
Shahaadooyin ayaa la guddoonsiiyay geesiyaasha Dalxiiska ee maanta ka soo qeyb galay ama matalayay oo ay ku jiraan Michel Nahon oo u dhashay Faransiiska, Aleksandra Gardasevic oo u dhashay dalka Montenegro, Professor Geoffrey Lipman ee SunX ee Belgium, iyo Agnes Muchuha ee Kenya.
Laba geesi oo cusub oo sharaf leh ayaa maanta laga aqoonsaday WTM.
Waxay ahayd maalintii ugu horreysay ee loo noqdo maamulaha cusub ee Dalxiiska Barbados Jens Thraenhart. Waxaa soo dajiyay Mudane. Wasiirka Dalxiiska ee Barbados, Hon. Lisa Cummins, iyo madaxa Dalxiiska Barbados. Waxa kale oo ay ahayd maalintii lagu matalay Abaalmarinta Hero Award oo uu ku mutaystay wax qabadkiisii ​​la yaabka lahaa, oo ay ka mid ahayd markii uu ahaa Guddoomiyaha Dalxiiska Mekong oo uu bishii hore ka tagay.
Halyeygii labaad ee cusub ee maanta la abaalmariyey ayaa ahaa Dov Kalmann, Israa'iil. Wuxuu ahaa xubintii ugu horreysay ee doodda dib-u-dhiska.travel wuxuuna ahaa qalab kulankii ugu horreeyay ee ururka ee ka dhacay Berlin, Jarmalka, Maarso 2020. Dov wuxuu matalaa Hay'adda Dalxiiska ee Thailand ee Israa'iil.
Martigaliyaha, Hon. Najib Balala, ayaa u mahadceliyey Shabakadda Dalxiiska Adduunka iyo Juergen Steinmetz doorka ururkan iyo Juergen ay ka qaateen soo kabashada dalxiiska.
Sidaas waxaa yiri mudane. Edmund Bartlett oo u dhashay Jamaica, oo sidoo kale ah qofka ka dambeeya doodda adkeysiga dalxiiska ee Kariibiyaanka.
Geesiyaasha Dalxiiska waa la magacaabi karaa kharash la'aan www.heroes.travel
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Shabakadda Dalxiiska Adduunka: www.wtn.travel